မြေထဲပင်လယ်အစားအစာ- သင်စားနိုင်သောအစားအစာများ၊ တစ်ပတ်စာမီနူးများ၊ ချက်ပြုတ်နည်းများ | တရားဝင် site Keto Guru
စတင်ရန်ပထမနေရာသည် အာဟာရအခြေခံမူများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းသည် လူတစ်ယောက်၏ ကျန်းမာရေးနှင့် အသွင်အပြင်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။Mediterranean အစားအစာသည် သင့်အား သင့်ရုပ်ပုံလွှာကို စည်းစနစ်ကျစေပြီး အသုံးဝင်သောပစ္စည်းများဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြည့်ဝစေရုံသာမက ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်း ထိန်းထားနိုင်စေပါသည်။
ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချလိုစိတ် ပြင်းပြခြင်းသည် အဖုအထစ်များ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ခဏတာ ရလဒ်ကို လိုချင်ရင် အများအပြားက တင်းကျပ်တဲ့ အစားအသောက် ကန့်သတ်ချက်တွေကို အသုံးချပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ကီလိုဂရမ်များစွာကို ဖယ်ရှားပစ်မယ်လို့ ကတိပေးထားတဲ့ ဆေးဝါးတွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။အပိုဆေးများအသုံးမပြုဘဲ ချောမွေ့စွာ ကိုယ်အလေးချိန်ကျမှသာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဘေးကင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Diet သည် အချို့သောအစားအစာများကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံ၍ အာဟာရ၏နိယာမဖြစ်သည်။kefir (နို့ချဉ်နှင့် အခြားထုတ်ကုန်အချို့ကို အသုံးပြုခွင့်) ကဲ့သို့သော တင်းကျပ်နိုင်ပြီး မတင်းကျပ်ပါ။မကြာခဏ၊ တင်းကျပ်မှုမရှိသော အစားအစာသည် တစ်နေ့လျှင် စားသုံးသော ကယ်လိုရီနှင့် အစားအသောက် စားသုံးမှု (ပရိုတင်း၊ အဆီ၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်) ကို တွက်ချက်ခြင်းအပေါ် အခြေခံသည်။Mediterranean အစားအစာသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျန်းမာစေပြီး ပေါင်ပိုရှိပါက ၎င်းတို့ကို ဆုံးရှုံးစေသည့် အောက်ပါ အာဟာရအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်၊ အမျိုးသမီးများသည် မြေထဲပင်လယ်အစားအသောက်တွင် ကိုယ်အလေးချိန်ချနည်းကို ပို၍စိတ်ဝင်စားလာကြသည်။
ချက်ချင်းရလဒ်များကို ဤနေရာတွင် မမျှော်လင့်ပါနှင့်။တစ်ပတ်လျှင် 1-2 ကီလိုဂရမ် ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။အစားအသောက်၏သက်တမ်းသည် တစ်ပတ်မှဖြစ်သည်။မြေထဲပင်လယ်အစားအစာကို အစားအသောက်အဖြစ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် မလိုအပ်ပါ။ဤအရာများသည် ခန္ဓာကိုယ်ကို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့် ယေဘုယျစည်းမျဉ်းများဖြစ်သည်။မြေထဲပင်လယ် အစားအသောက် ဟင်းလျာများ သည် အတော်လေး ကွဲပြားပြီး လူတိုင်းကို ခြွင်းချက်မရှိ နှစ်သက်စေပါသည်။
အမေရိကန် အာဟာရပညာရှင်များက ၎င်းကို ယေဘူယျအသုံးပြုမှုအဖြစ် မိတ်ဆက်ပေးသောအခါ လွန်ခဲ့သည့်ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင် အစားအသောက်သည် လူကြိုက်များလာခဲ့သည်။မြေထဲပင်လယ်နိုင်ငံတိုင်းတွင်၊ အစားအစာသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အာဟာရလက္ခဏာများရှိသည်။
မြေထဲပင်လယ်အစားအစာ၏ဥပမာသည်ထူးခြားသည်။20 ရာစုတွင်၊ နိုင်ငံအသီးသီးတွင်နေထိုင်ကြသူများ၏အာဟာရအခြေခံမူများကိုလေ့လာနေစဉ်တွင်အာဟာရပညာရှင်များသည်ဝိရောဓိကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ပြင်သစ်လူမျိုးများသည် အဆီ၊ ပေါင်မုန့်ဖြူ၊ ဘေကွန်နှင့် ဒိန်ခဲများကို အများအပြားစားကြသော်လည်း အမေရိကန်လူမျိုးများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းတို့သည် သေးသွယ်ပြီး နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါများကို မခံစားရပေ။အချက်တစ်ခုလုံးသည် အာဟာရမျှတမှုတွင် ရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိရပေသည်။
ဤစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြီးနောက်၊ အထူးသဖြင့် အာဟာရပညာရှင်များသည် မြေထဲပင်လယ်တွင်နေထိုင်သူများ၏ အာဟာရအခြေခံမူများကို ဂရုတစိုက်လေ့လာစပြုလာသည်။
အရေးကြီးသည်! မြေထဲပင်လယ်အစားအစာသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများစွာ၏ သမိုင်းဝင် အမွေအနှစ်အဖြစ် ယူနက်စကိုမှ အသိအမှတ်ပြုထားသော ကမ္ဘာ့တစ်ခုတည်းသော အာဟာရဆိုင်ရာ နိယာမဖြစ်ပြီး ယနေ့တိုင် ယေဘုယျ အာဟာရကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည့် နိုင်ငံများစွာ၏ သမိုင်းအမွေအနှစ်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများဖြင့် ကြွယ်ဝသောမီနူး၊
ခန္ဓာကိုယ်ထုထည်ကို လျှော့ချခြင်း၊ cellulite ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် အရေပြားလျော့ရဲခြင်း၊
သန့်ရှင်းသောအသားအရေ၊ သန်မာသောလက်သည်းများနှင့် ကျန်းမာသောဆံပင်၊
မြေထဲပင်လယ်အစားအစာကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ၊ နို့တိုက်မိခင်များ၊ ကလေးများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများက အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အစားအသောက်များတွင် contraindications နီးပါးမရှိပါ။စိတ်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ အစားအသောက်စျေးနှုန်းနှင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျင်မြန်စွာ လျှော့ချနိုင်ခြင်း မရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။သို့သော်လည်း စိတ်ရှည်ခြင်း၊ အာဟာရဆိုင်ရာမူများကို လိုက်နာခြင်း နှင့် ရလဒ်ကောင်းများကို အာမခံပါသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာအစားအသောက်က လူတော်တော်များများနှစ်သက်တဲ့ အာလူးကိုတောင် စားသုံးခွင့်ပြုပါတယ်။သို့သော် ထောပတ်ကို အသုံးပြု၍ ယူနီဖောင်းဖြင့် ဖုတ်ရမည်။
မြေထဲပင်လယ်အစားအစာသည် နိုင်ငံများစွာတွင် အမြစ်စွဲလာပြီး ချက်ပြုတ်နည်းများကို ဒေသခံများ၏ အရသာအကြိုက်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။
အစားအသောက်၏ အဓိကနိယာမမှာ အစားအစာပိရမစ်ကို လိုက်နာခြင်းဖြစ်သည်။အခြေခံ (60%) သည် ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ဖြစ်ပြီး အလယ်ဘလောက် (30%) သည် ပရိုတင်းဖြစ်ပြီး၊ ထိပ်မှာ အဆီနှင့် ရိုးရိုးဘိုဟိုက်ဒရိတ် (10%) ဖြစ်သည်။ဒါကြောင့် မြေထဲပင်လယ်အစားအစာမှာ ဘာတွေပါဝင်လဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။
ထို့အပြင်၊ ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေအလိုက် အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်-
နေ့စဉ် (ဖွဲနုပေါင်မုန့်၊ ခေါက်ဆွဲ၊ ခေါက်ဆွဲ၊ စီရီရယ်၊ သံလွင်ဆီ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများ၊ ဒိန်ချဉ်များ၊ ဒိန်ခဲများ)
တစ်ပတ်လျှင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ (ကြက်ဥ၊ အသားဖြူ၊ ငါး၊ ပင်လယ်စာ);
တစ်လလျှင်နှစ်ကြိမ် (အချိုပွဲ၊ အနီရောင်အသား) ။
အစာအိမ်အတွင်း အလေးချိန်အလွန်အကျွံမဖြစ်အောင် ငါးနှင့် အသားများကို ခွဲခြားထားသင့်သည်။နေ့တိုင်း သစ်သီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် များများစားပါ။
ဘယ်လိုအစားအစာတွေစားနိုင်လဲ၊ ဘာတွေကို တားမြစ်ထားလဲ။အကောင်းမွန်ဆုံး အစားအသောက်စည်းမျဉ်းကတော့ အကန့်အသတ်မရှိတာဘဲ။ဝိုင်လိုချင်ပါတယ် - ကျေးဇူးပြု၍ အရည်အသွေးမြင့်ရပါမည်။အချိုတွေစားချင်စိတ်ရှိလား။အိမ်မှာ ကိတ်မုန့်လုပ်နိုင်ပြီး သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ ပါဝင်မှုကို အတိအကျ သိနိုင်ပါတယ်။မြေထဲပင်လယ်အစားအစာတွင်၊ အပတ်စဉ် မီနူးများနှင့် ချက်ပြုတ်နည်းများသည် လုံးဝမျှတသည်၊ ပြင်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး အရသာလည်းရှိသည်။
တစ်နေ့လျှင် အစာ ၅ နပ် - အဓိက ၃ လုံးနှင့် အဆာပြေ ၂ နပ်။
နေ့စဥ်နေ့အတွက် မြေထဲပင်လယ်အစားအစာမီနူးနမူနာမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
မနက်စာ။Oatmeal, မြေတပြင်လုံးဂျုံမုန့်ချပ်, လက်ဖက်ရည်;
ညစာ။ဖုတ်ထားသောငါး 200 ဂရမ်နှင့်ပေါင်းထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ဝိုင်တစ်ခွက်;
ညစာ။ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းချို, ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ် (ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်သခွားသီး);
မနက်စာ။Muesli၊ သဘာဝဒိန်ချဉ်၊ ပေါင်မုန့်တစ်ချပ်နှင့် ဒိန်ခဲ၊
ညစာ။ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်အတူ Buckwheat ဟင်းချို;
ညစာ။တူရကီအသား cutlets, ဟင်းသီးဟင်းရွက်စွပ်ပြုတ်။
ညစာ။ပန်းဂေါ်ဖီ casserole, ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ်;
ညစာ။ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူ Omelet ဝိုင်တစ်ခွက်။
မနက်စာ။သဘာဝဒိန်ချဉ်၊ သစ်သီးဝလံများဖြင့် ချက်ထားသော Muesli၊
ညစာ။ယုန်သား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်စွပ်ပြုတ်၊ ခေါက်ဆွဲ၊ ဝိုင်တစ်ခွက်။
သရေစာများတွင် သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ဒိန်ချဉ်၊ အခွံမာသီးများနှင့် အခြားအရာများ ပါဝင်သည်။
မြေထဲပင်လယ်အစားအစာတွင် ပြင်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး မယုံနိုင်လောက်အောင်အရသာရှိသော ဟင်းပွဲများစွာအပါအဝင် အမျိုးမျိုးသောဟင်းလျာများအတွက် ချက်ပြုတ်နည်းများ ပါဝင်ပါသည်။
ကြီးမားသော zucchini နှင့်ခရမ်းချဉ်သီး;
ဆန် (350 ဂရမ်);
မီးဖိုကို 180 ဒီဂရီအပူပေးထားပါ။
မုန့်ဖုတ်စာရွက်ကို ထောပတ်နဲ့ ဆီလိမ်းပြီး လှီးထားတဲ့ အသီးအရွက်တွေကို အပေါ်ကနေ တင်လိုက်ပါ။
အရွက်ကို Oven ထဲတွင် မိနစ် 20 ထားပါ။
ဒီအချိန်မှာ ဒယ်အိုးထဲမှာ ကြက်သွန်နီနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကို ၇ မိနစ်လောက် ပြုတ်ထားလိုက်ပါ။
ရေများ အငွေ့ပျံသွားသောအခါ ဖုတ်ထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ဒယ်အိုးထဲသို့ လောင်းထည့်ပါ။
အဆီနည်းဒိန်ခဲ (70 ဂရမ်);
kefir (50 ဂရမ်);
မုန့်ဖုတ်စာရွက်ကို ဆီဖြင့် ဆီလိမ်းပြီး ငါးအသားလွှာများကို ဖြန့်ခင်းပါ။
သံပုရာရည်၊ kefir၊ ဇီယာစေ့နှင့် ဆားတို့ကို ရောစပ်ပြီး ငါးပေါ်တင်ပါ။
အပေါ်မှ ဒိန်ခဲကို ခြစ်ထားသော ခြစ်ဖြင့် ပွတ်ပေးပါ။
မိနစ် 20 ပြီးနောက် 180 ဒီဂရီအပူပေးထားသောမီးဖိုမှအချောထည်ကိုထုတ်ယူနိုင်သည်။
Mediterranean Weight Loss Diet သည် အစားအသောက်များတွင် သင်နှစ်သက်သော အစားအစာများကို ထည့်သွင်းနိုင်စေမည့် အမျိုးမျိုးသော မီနူးကို ပေးဆောင်ထားပါသည်။
မြေထဲပင်လယ်အစားအသောက်များတွင်၊ စည်းမျဉ်းများသည် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။ထိရောက်စွာ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချရန်အတွက် ထုတ်ကုန်များစွာကို စွန့်လွှတ်ရန် လိုအပ်သည်-
ဆိုင်တွင်ဝယ်ထားသော ketchup၊ mayonnaise နှင့် အခြားဆော့စ်များ။
ခွင့်ပြုထားသော အရက်သည် အရည်အသွေးမြင့် အနီရောင်ဝိုင်ခြောက်များသာဖြစ်သည်။အထူးသဖြင့် ဘီယာ နှင့် ဗော့ဒ်ကာ သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးရှိမည်မဟုတ်ပေ။
အာဟာရအခြေခံမူများကို တတ်နိုင်သမျှ ထိရောက်စေရန်၊
တစ်ချိန်တည်းမှာ အစာစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တစ်နေ့တာအတွင်း အနည်းဆုံး အရည်တစ်လီတာသောက်ပါ။ဖြစ်နိုင်ရင် ရေနွေးကြမ်းနဲ့ ရေ။ကော်ဖီချစ်သူများကို မနက်ခင်းတွင် တစ်ခွက်စာ သောက်သုံးခွင့်ပြုသော်လည်း နေ့စဉ် သောက်သုံးခွင့်မရှိပါ။
သံလွင်ဆီသည် ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ်ကို သာယာသောအရသာကိုပေးကာ ခန္ဓာကိုယ်ကို အသုံးဝင်သောပစ္စည်းများဖြင့် ပြည့်ဝစေသည်။
အားကစားလှုပ်ရှားမှုများ။ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကောင်းနေဖို့၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအတွက် နေ့စဉ်အချိန်ကို မြှုပ်နှံထားဖို့ လိုပါတယ်။ဒါက အိမ်မှာ မနက်ပိုင်း လေ့ကျင့်ခန်း ဒါမှမဟုတ် Fitness Center မှာ ညနေပိုင်း လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်လို့ရပါတယ်။
အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးက "ကျွန်မတို့မိသားစုက အချိုတွေကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ အရင်က ကိတ်မုန့်နဲ့ ကိတ်မုန့်တွေကို အပတ်တိုင်း ဝယ်တယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ လူတိုင်းက ကိုယ်အလေးချိန် ပိုတက်လာတယ်။ မြေထဲပင်လယ်အစားအစာကို စမ်းကြည့်ပြီးမှ အဲဒါကို မိသားစုတစ်ခုလုံးရဲ့ အဓိက နိယာမအနေနဲ့ လုပ်ခဲ့တာပါ။ မြေထဲပင်လယ်အစားအစာကို တစ်လကြာစားပြီးနောက် အမျိုးသမီး၏ခင်ပွန်းနှင့်သမီးသည် ၃-၄ ကီလိုဂရမ်ခန့် ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။ယခုမိသားစုသည် အိမ်လုပ်သကြားများကိုသာ ချက်ပြုတ်ကြပြီး အစားအသောက်ကို ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ကြသည်။
အသက် 38 နှစ်ရှိ အမျိုးသမီး- "ဝိတ်ချဖို့ မက်လုံးက လာမယ့် အားလပ်ရက် ဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့ပါ။ အရမ်းလှချင်တယ်၊ အချိန်က 1.5ပဲ ရှိသေးတာ။ နည်းနည်းလေး3ကီလိုဂရမ် ကျသွားမယ်။ ရလဒ်ကို သတိထားမိတယ်။ သုံးပတ်၊ အခုတစ်ခါ ကျွန်တော် မြေထဲပင်လယ်ကို လအတော်ကြာ အစားအသောက်စားဖူးတယ်။"
ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်အတွက် မြေထဲပင်လယ်အစားအစာသည် ရိုးရှင်းလုံလောက်ပြီး အစားအစာအပေါ် ပြတ်သားသောကန့်သတ်ချက်များ မလိုအပ်ပါ။ရုပ်ရည်ကောင်းမွန်ပြီး ကျန်းမာနေစေရန်အတွက် အနည်းငယ်မျှသာ လိုအပ်သည်- စဉ်းစားပြီး စားသုံးသည်ကို စောင့်ကြည့်ပါ။အာဟာရဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ အစားအစာမျိုးစုံက သင့်ကို နေ့တိုင်း လန်းဆန်းစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို တောင့်တင်းစေပြီး ပုံသဏ္ဍန်ကောင်းနေစေမှာပါ။